Dagaal culus oo kasoconaya Degmada Aato ee gobolka Bakool | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Dagaal culus oo kasoconaya Degmada Aato ee gobolka Bakool
Dagaal culus oo kasoconaya Degmada Aato ee gobolka Bakool
Wararka ka imaanaya Degmada Aato ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaal culus oo lagu riiqmay uu ka dhacay gobolkaasi, dagaalka ayaa waxa uu u dhexeeya ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-shabaab.
Dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in qasaaro culus uu ka dhashay dad badana ay ku barakeceen, dagaalka ayaa ka dhashay kadib markii sida la sheegay kooxda Al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada Dowladda.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Dowladda Soomaaliya aya waxa uu dhinacooda sheegay in ay guul ka gaareen dagaalka, isaga oo sheegay in ay ka laayeen kooxda Al-shabaab ciidan fara badan waa siduu hadalka u dhigaye.
Halka dhinaca kale, kooxda Al-shabaab iyaguna ay sheegteen in ay laayeen ku dhawaad 30 ka mid ah ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwo kale oo dhinaca itoobiya ka imaaday kuwaas oo gurmad u ahaa ciidamada Dowlada.
Sikastaba ha ahaate, degmada Aaata ayaa xili hore waxaa ka dhacay dagaal culus kaa oo ay ku dhinteen ku dhawaad 30 askari oo katirsan labada dhinac.
Degamada Aato ayaa lagu soo waramayaa in ay dadku aad uga barakacayaan kadib dagaalada aadka u culus ee soo laalaabtay.
Wixii warar dheeraad ah waxaad kala socon kartaa wararkeena danbe.
Previous articleGeesinimada Askarigi isku dhigay Gaarigi walxa Qarxa ka buuxay oo loo riyaaqay
Next articleWasiirki hore ee Gaashaandhiga Soomaaliya oo warbixin ka bixiyay xaalada Milateriga Soomaaliya